Akụkọ - Otu esi ahọrọ akpa mkpofu
Site na mmụba nke ịdị mma nke ndụ, ọnụ ọgụgụ na ụdị ihe mkpofu ụlọ na-abawanye, site na akwụkwọ mposi gaa na nri fọdụrụnụ.
Akpa mkpofubụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na ezinụlọ ọ bụla, na adịghị mma nke akpa mkpofu na akwụkwọ mposi nkịtị na peels mkpụrụ osisi, ma ozugbo chere ihe fọdụrụ na ihe ụfọdụ na ofe na mmiri ga-ewe oke iwe.
Enwere ọtụtụ ụdị akpa mkpofu n'ahịa, yabụ kedu ka anyị ga-esi họrọ ha n'ụbọchị izu ụka?Yabụ kedu ka ị ga-esi mara ọdịiche dị n'etiti akpa mkpofu na nke dị njọ?
Nke mbụ, akpa mkpofu ndị dị ala na-ejikarị plastik emegharịgharị ma ọ bụ ngwaahịa aka nke abụọ emegharịrị.Ụdị nke aakpa mkpofun'onwe ya nwere isi rọba dị arọ na formaldehyde na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, na ọtụtụ n'ime akpa mkpofu ndị a dị ala nwere akụkụ ma ọ bụ ntụpọ gbasasịa na akpa rọba, nke dị mfe ịmata.Akpa mkpofu dị oke mma bụ translucent kpamkpam na enweghị ike imebi ya.
Taa bụ ezigbo mmaakpa mkpofu, Nke mbụ na ihe onwunwe, iji ihe ọhụrụ PE ihe, nchekwa na ahụike, ọ dịghị àgwà ísì, na gbakwunyere site na mgbe niile okpomọkụ technology akpa ahu inogide, ibu ike dị ike, adịghị mfe imebi.
Nke abuo, maka ikike mgbochi mmiri, enwere ọtụtụ ihe na mkpofu ụlọ bụ ụfọdụ ofe na mmiri.Ọ bụrụ na akpa mkpofu dị mfe ịwụpụ, ọ bụghị naanị na-asọ oyi mgbe ị na-atụfu ya, kamakwa ọ na-esiri gị ike iburu.
Ụdị akpa a na-ekpofu ihe na-eji usoro ihe nkiri na-emepụta ihe na-emepụta ihe, nwere ikike nkwụsị nke ọma, ọbụna na-ejide kilogram 20 nke durian agaghịkwa emebi.
N'otu oge ahụ, ọ na-esi ike nke ukwuu, ọ bụrụgodị na eriri ahụ agaghị agbaji ngwa ngwa.
Ụdị nkwụsịtụ abawanyela oghere, iji dozie ihe dị mfe ịdọka ihere.